जहाँ विमान चिर निद्रामा जान्छन्- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
जहाँ विमान चिर निद्रामा जान्छन्
जेष्ठ ३०, २०७८ ददि सापकोटा
पेरिस — क्वान्टस एयरको ७४७ बोइङ लस एन्जलसबाट अमेरिकाकै क्यालिफोर्नियास्थित मोजावे मरुभूमिमा रहेको आफ्नो चिहान (ग्रेभ यार्ड) मा उत्रियो । यो विमान यहाँको सुख्खा मौसम, तातो हावा र खुला आकाशमा सधैंको लागि अन्तिम विश्राम लिने तर्खरमा थियो । विमानका पाइलट सिङलेटनले पाइलट ह्याट झुकाए । शरीर थोरै निहुराएर बिदाइ गरे 'अब तिम्रो माग कसैले गर्ने छैन । तिम्रै स्वामित्वकर्ताले पनि गर्ने छैनन् । मेरो विश्वासिलो पुरानो साथी ७४७ तिमीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! तिम्रो चिरशान्तिको कामना ।'
सन् २०२० को जुलाई २२ का दिन क्वान्टस एयरको बोइङ ७४७ सेवानिवृत्त हुनु केही घण्टाअघि अन्तिम उडान गरिरहेको थियो । खासमा यो विमानको बिदाइ सन् २०२० को अन्त्यतर्फ हुनुपर्ने थियो । कोरोना संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको पतनसँगै यो विमान समय अघि नै सेवानिवृत हुनुपर्‍यो । सिड्नीबाट अमेरिकाको लस एन्जलसतर्फ उडाउँदै गर्दा यो विमानका चालक जोन सिङलेटन औधि दुखी थिए ।
'मैले क्वान्टास ७४७ को यो बोइङमा सयौं हजारौं किमीको यात्रा गरें । आज समय नपुग्दै यसको अन्तिम बिदाइ गर्नुपर्दा म अत्यन्त दुखी छु' विमानलाई सदाका लागि विश्राम गर्न लागेका चालक जोन सिङलेटनले 'फेयरवेल टु बोइङ ७४७ : अ हप अप टु द एरोप्लेन ग्रेभयार्ड' शिर्षकमा आफ्नो अनुभव उल्लेख गरेका छन् ।
ठूला बोइङहरु वर्षौं उडेका हुन्छन् । कतिपय पाइलट र परिचारिकाहरुले ती विमानमा वर्षौं सेवा गर्छन् । त्यस्ता विमानले तिनको रोजगारी र रोजिरोटीको सुनिश्चितता मात्रै गरेको हुन्न कि जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण समय र अनुभव पनि समेटेको हुन्छ । त्यसैले, वर्षौं काम गरेको विमानसित तिनको भावना, संवेदना र जीवनको महत्वपूर्ण क्षण पनि गाँसिएको हुन्छ । आफूले वर्षौं काम गरेको विमानलाई चिहान घरमा पठाउँदा तिनलाई भावनात्मक रुपले छुन्छ ।
'मैले ११ वर्ष यो क्वान्टास ७४७ सित उडें । यसको दु:ख र सुखमा मसँगै रहेँ । मेरो परिवार धान्न र मलाई अनुभवी सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन यसैले अवसर दियो । मैले मेरो परिवार यसैको सक्रियताले धानेँ । यसलाई चिहानघरमा छोड्नुपर्दा आज मलाई परिवारको सदस्य गुमाएको महसुस भएको छ' यो विमानकी परिचारिका क्याथरिन प्नाडेले फ्लाइट राडारमा आफ्नो भावना पोखेकी छन् ।
डेल्टा, युनाइटेड र अन्य एयरलाइन्सहरूले मरुभूमिमा आफ्ना सबैभन्दा ठूला विमानहरू भण्डारणको लागि पठाएका छन् । किनभने कोरोना भाइरसको कारण विमानहरु एकदमै नगन्य उडेका छन् । विश्वका लगभग ८० प्रतिशत विमानहरु ग्र्याउन्डेड भएपछि प्राय आकाशमै उडिरहने विमानहरुलाई पार्किङ पाउन कठिन परेको छ । त्यसैले तिनलाई ठूला विमानका चिहानहरुमा लगेर पार्किङ गरिएको छ ।
अहिले मारिना, एरिजोनामा रहेका विमानका चिहान (एरोप्लेन ग्रेभयार्ड) मा विमानहरू अवकाश लिन जान्छन् । तर केही एयरलाइन्सले आफ्ना जेटहरू त्यहाँ पठाइरहेका छन् बाहिर सवारीमा गएझैं । धेरै उमेर भएका विमानहरू जुन एक्लै एयरफिल्डको एकल रनवेमा अवतरण गर्दछन् । तिनीहरूले लामो निन्द्राको लागि तयारी गर्दा आकाशलाई फेरि कहिल्यै छुने आशा गर्न सक्दैनन् ।
एरिजोनामा रहेको पिनाल एयरपार्क विमानहरुको चिहानघरका रुपमा राम्ररी परिचित छ । जहाँ बुढेसकालका विमानहरू भण्डार गरिन्छन् । मरेका जीवहरुको छाला, हड्डी र अन्य अंग विभिन्न प्रयोजनका लागि झिकेझैं त्यहाँ म्रित विमानका काम लाग्ने अंगहरु झिकिन्छ ।
फोनिक्सको ९० माइल दक्षिणपट्टि एरिजोना मरुभूमिको बिचमा एउटा विमानस्थल छ । यो एकदमै एकान्त ठाउँमा छ । यसको रनवे एउटा मात्रै छ । यात्रुहरुको लागि टर्मिनल छैन । यसको नाम पिनाल एयरपार्क हो । यसमा व्यपारिक विमानहरु हुँदैनन् । तर ठूला प्रतिकात्मक विमान (आइकोनिक एयरक्राफ्ट्स) हरुले यो विमानको आकाशमा चक्कर मारिरहन्छन् ।
पिनाल एयरपार्क विमानहरुको चिहानका रूपमा परिचित छ । जहाँ लामो समय सम्मका लागि विमानहरू लाइन लगाएर राखिन्छन् । जमिनमा अवतरित विमानहरुको लागि यो सेवा अवकाशप्राप्त घर जस्तै हो जसको स्थान युवा विमानहरुले लिन्छन् । पुरानाले बाटो छोड्छन् ।
एरिजोनाको मारानामा विमानका अस्थिपन्जरहरु अहिले पाइँदैनन् । बरु तिनलाई मरुभूमिको घाम तातेको देखिन्छ । तर ती विमानले आकाशमा धेरै समय बिताएकोले तिनका केही पाटपूर्जा अहिलेको विमानको लागि प्रयोगजन्य हुन्छन् । पखेटाहरु आमनेसामने गरेर विमानहरू महिनौं, वर्ष र दशकौंसम्म स्थायी आराममा बस्छन् ।
मरुभूमिको सुक्खा तापले पुरानो एयरफ्रेमहरू कायम राख्न उत्तम मौसम प्रदान गर्दछ । तर मारानाको विमानस्थलमा भण्डारित विमानहरुले भने फेरि कहिल्यै आकाशमा उड्ने अवसर पाउँदैनन् ।
एरिजोनस्थित मरानाको पिनाल एयरपार्क अमेरिकाको दक्षिणपश्चिममा पर्ने एक चिहान घर हो । यो क्षेत्र तातो, सुख्खा मौसमको रुपमा परिचित छ । यस्तो मौसममा विमानहरु बढी सुरक्षित रहन्छन् । चिसो मौसममा बसेका भन्दा न्यानो मौसममा बसेका विमानको पाटपूर्जाको स्वास्थ्य बढी राम्रो हुन्छ ।
त्यसो त, चिहानघरमा ओर्लिने धेरै विमानको काम समाप्त भएको हुन्न । किनकी तिनीहरूका भागहरू अझै उडानमा उड्ने विमानहरूको लागि मूल्यवान् रहेका हुन्छन् । किनकी विमान परिचालकहरूलाई जहिले पनि विमानहरू मर्मतको लागि थप पाटपूर्जाको आवश्यकता हुन्छ ।
एसियामा यस्ता चिहान घर थाइल्याण्डमा मात्रै छ । भारतमा भने विमानहरु गाड्ने छुट्टै चिहानघर छैन । बरु विमान काम नलाग्ने भएपछि त्यसलाई इन्डियन एयर फोर्सले दान दिन सक्छ, भित्री भागका सबै पाटपूर्जाहरु झिकिसकेपछि यसको शरीरको बाहिरी भाग । यस्ता भाग एभिएसन स्कूल, विश्वविद्यालय, सिनेमा कम्पनी र विशेषज्ञहरुले शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । ती पाटपूर्जा दान दिने वा तिनलाई गलाएर, पगालेर फेरि विमानको पाटपूर्जा बनाउन प्रयोग गरिन्छन् ।
केही विमानहरू आन्तरिक मर्मतका लागि माराना पनि पठाइन्छन् ताकि उनीहरू फेरि नयाँ ब्राण्डको रूपमा देखापर्न सकुन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि विश्वभरि लामो हवाइयात्राको मागमा कमि आएकाले विश्वका एयरलाइन्सले आफ्ना जहाजहरूलाई भण्डारणको लागि माराना पठाउँछन् जहाँ उनीहरूले चिसो भन्दा मरुभूमिको घाम ताप्न पाउँछन् ।
कोरोना भाइरस फैलावटको कारणले आएको औद्याेगिक मन्दीको अवस्थामा विश्वका केही एयरलाइन्सहरूले पायक पर्ने ठूला सहरी विमानस्थलमा पार्किङ नपाएपछि एरिजोना मरूभूमिमा विमानहरु छानीछानी पठाएका छन् । डेल्टा एयरलाइन्सका लागि पनि आफ्ना विमानहरु भण्डारका लागि अमेरिकाको माराना मुख्य विमानस्थल बनेको छ ।
कोरोनाको कारणले मारानाको विमानस्थलमा नयाँ विमानहरु आएका छन् । ती अल्पकालीन पाहुनाका रुपमा आएका हुन् दिर्घकालीन आवासियका रुपमा भन्दा ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ २१:००
सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि फ्रान्स खुला गर्ने घोषणा
जेष्ठ २३, २०७८ ददि सापकोटा
पेरिस — फ्रान्सले स्वास्थ्य सतर्कताका लागि विभिन्न सर्तहरुसहित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि आफ्नो देश जुन ९ देखि खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यो निर्णयपछि खोप लगाउनेका लागि युरोपमा कोरोना भाइरस परीक्षणको आवश्यकता हटाउने निर्णय समेत गरेको छ । अमेरिकालगायत विश्वका धेरैजसो ठाउँबाट खोप लगाइएको प्रमाण बुझाउन सक्ने पर्यटकलाई सहजै भित्रिन दिइने छ । तर कोरोना भाइरस परीक्षणको नकारात्मक रिपोर्ट भने देखाउनुपर्ने छ ।
यस्तै कोरोना भाइरसका विभिन्न संस्करणसित कडा संघर्ष गरिरहेका ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश, उरुग्वे जस्ता देशहरूबाट आएका पर्यटकहरूले भने उनीहरूको भ्रमणका लागि बाध्यकारी कारण देखाउनुपर्ने छ । फ्रान्सले कडा नियम र सर्तको पालना गर्नुपर्ने भन्दै भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकासहित १६ देशलाई रातो सूचीमा राखेको छ ।
युरोप बाहिरका मुलुकका लागि फ्रान्स सरकारले जारी गरेको नयाँ यात्रा नियममा विश्वका बाँकी भागहरू सुन्तला रङमा वर्गीकृत गरेको छ । यसको अर्थ युरोप बाहिरबाट आउनेसित सतर्कता अपनाउनुपर्ने भन्ने हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत लगायत 'सुन्तला रङ' को सूचीमा राखिएका देशहरूबाट खोप लगाएर आएका आगन्तुकहरूले अब फ्रान्स ओर्लिएपछि क्वारनटाइनमा बस्नुपर्दैन । र, तिनले फ्रान्स भ्रमणको कारणहरूको औचित्यपनि प्रमाणित गर्नुपर्दैन । यद्यपि तिनीहरूसित ७२ घण्टाको नेगेटिभ पीसीआर परीक्षणको प्रमाण खोजिने छ । अथवा ४८ घण्टा भित्रको नकारात्मक एन्टिजेन परीक्षण माग गरिने छ ।
युरोपेली आगन्तुक र अन्य सात देशबाट आउनेलाई हरियो श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ । अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान, लेबनान, न्युजिल्याण्ड र सिंगापुरमा खोप लगाएका नागरिकले अब फ्रान्स ओर्लिँदा परीक्षणको आवश्यकता पर्दैन ।
पर्यटकका लागि खुकुलो पारिएका नियमहरूले फ्रान्सको पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो राहत दिने पर्यटन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १७:३६
बन्जीको त्यो ३ सेकेन्ड
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको कृषिमोह, नेपाली नेताहरूका लागि पाठ
'यो पानी कस्तो बेइमानी ?'
जनगणनामा आफैं छुट्दा...
महानगरको सौन्दर्य चेत